ChiGerman, Germany Wadzidzei nhasi? - CHIJERIMANI
Vongai pazvose ...
« : Ndira 12, 2014, 01:52:55 am »
Nyika ndeye fan. Chero bedzi hupenyu hupfupi. Sezvo akawanda mabasa anodiwa. Chero bedzi hupenyu huchakundwa pano nekusingaperi. Sezvo nyika isiri derelict. Sezvo muenzi-nyika pasirese ari mutongi naKerim. Sezvo pasina chakanaka kana chakaipa hachina kurangwa. Chero bedzi nenzira isina kukuvadza, mugwagwa unokuvadza unobudirira. Sezvo shamwari dzepasi pamwe nenzvimbo zviri kumusoro kwesuo reguva.
Chokwadi, ndiye akakurumbira kwazvo, Usakanganwe Zuva ramangwana renyika, Haazobayira chibereko chake kuNyika, Usatadzira hupenyu hwusingaperi hwehupenyu hwenyika, Ngaarege kuparara pamwe neupenyu hwake, Iye ngaazvione semueni uye aite sekuraira kwemuridzi weimba yevaeni, ngaavhure musuwo weguva uye apinde saadet-i yekusingaperi.
Risale-i Nur (Tsamba)
Re: Wadzidzei nhasi?
« Reply #1: Ndira 21, 2014, 12:38:25 am »
Tabriz, mosque unonhuwirira kwazvo pasi rose
muhotera. Ipo mosque iri kuvakwa
musk kunhuhwirira kunowedzerwa kune iyo sludge.
Kunyangwe makore mazana matanhatu apfuura, ichiri mosque
inonhuwirira musk ...
« Reply #2: Ndira 21, 2014, 08:02:09 am »
Kutenda tsk, ini ndakaidzidzawo.Iyo nyaya inobatsira.
Iwe unonyara kukuda iwe mushure mako.
« Reply #3: Ndira 21, 2014, 11:35:39 am »
Yakatorwa kubva ku: esma 41 - Ndira 21, 2014 na12: 38: 25 am
« Reply #4: Ndira 21, 2014 na 05:31:41 pm »
Ndakadzidza kusafunganya nezvese
« Reply #5: Ndira 24, 2014, 02:32:40 am »
Ndakaona kuti Marilyn Monroe ane zvigunwe zvitanhatu. Handizive kuti ichandiitirei
"KUGARA SEWE WAKO MUZUVA RENYIKA KUSHANDA NESIMBA RAKAZARA KUTI UITE KUSIYANA NEVAMWE KUPA HONDO YENYIKA YAKAOMA ..."
« Reply #6: Kurume 14, 2014 pa03: 36: 34 pm »
Usati kwandiri ndidzorere izwi rebenzi.
Nekuti mune muridzi wezwi iro, kune akawanda akawanda ezasi akafanana naye
pane mazwi. Iye achapindura mhinduro yako navo zvakare.
« Reply #7: Gumiguru 11, 2015, 07:37:38 pm »
-> Ndakadzidza kuti kunyangwe muna Gumiguru mamiriro ekunze anogona kutonhora zvakanyanya. Eg 6 °
Unotendera mumwe wenyu, iye akadana kune vakanaka, kuteerera zvakanaka uye kudzivisa zvakaipa. Ava ndivo avo vakaponeswa Ir Ir Imran, 104.
« Reply #8: Chikunguru 07, 2016, 01:24:22 am »
Ini ndakadzidza kuti hupenyu hwakazara neshamisiko, kuti iwe ungasangana neshanduko dzinowanza hupenyu hwako hwese munguva pfupi yemwedzi 1-3 kana mitanhatu, kuti shanduko idzi dzinotsiva hupenyu hwako hwese kana kudaidza zvakapfuura.
Uye kurarama chinhu chakanaka kwazvo, ini ndakadzidza kuti kukosha kwayo kunofanira kunge kuchinyatso kuzivikanwa, uye kuti iwe unofanirwa kurarama mazuva ese uchinakidzwa nenyika ino.
Iva iwe, usatambise huwandu hwako hwemazuva munyika ino
« Reply #9: Gumiguru 20, 2016, 10:26:02 pm »
-> Ndakadzidza kuti vasiri-vechiMuslim veIslam Nyanzvi vakanyora rondedzero yakadzama kupfuura vadzidzi vechiMuslim vechiIslam.
« Reply #10: Musi waNovember 11, 2016, 11:27:37 pm »
-> Ndakadzidza kuti kukwana kwakavanzwa mune zvakadzama.